Football Khabar » बार्सिलोनामा स्वारेजको भविष्य नयाँ मोडमा : मेस्सी र क्लब विभाजित !
बार्सिलोनामा स्वारेजको भविष्य नयाँ मोडमा : मेस्सी र क्लब विभाजित !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका उरुग्वेन फरवार्ड लुइस स्वारेज ला लिगामा गत डिसेम्बर महिनाका लागि ‘प्लेयर अफ् द मन्थ’ घोषित भए । सो महिना उनले ला लिगमा ५ खेलबाट ३ गोल गर्दै ६ गोलमा असिस्ट गरे । यो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३२ वर्षका स्वारेज अहिले पनि उत्कृष्ट लयमै छन् ।
तर, क्लब बार्सिलोनाले भने स्वारेजलाई यो सिजनपछि बिदा गर्ने तयारी गरेको खबर स्पेनिस मिडियामा प्रकाशित भएका छन् । सन् २०१४ मा बार्सिलोना आएका स्वारेजको क्लबसँग सम्झौता २०२१ सम्मका लागि छ । अर्थात्, उनको र कप्तान मेस्सीको सम्झौता एकसाथ सकिँदैछ । तर, बार्सिलोनाले अब स्वारेजसँग नयाँ सम्झौता नगर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
बार्सिलोनाले क्लबको भविष्यलाई ध्यान दिँदै स्वारेजको विकल्प खोज्न थालेको छ । र, उसले यो सिजनको अन्त्यसँगै स्वारेजलाई अन्य क्लबमा पठाउने तयारी गरेको छ । खबरअनुसार बार्सिलोनाले स्वारेजको स्थान लिन सक्ने नयाँ ‘९ नम्बर’ खेलाडी मार्केटमा पहिचान गरेको छ ।
यता, कप्तान मेस्सीले भने अझै पनि स्वारेजको विकल्प तत्काल खोजी नगर्न क्लबसँग अनुरोध गरिरहेको खबर आइरहेका छन् । आफ्ना खास साथी स्वारेज आफू बार्सिलोनामा छँदासम्म सँगै रहेको हेर्न मेस्सी चाहन्छन् ।
सरुवा बजारका चर्चाअनुसार बार्सिलोनाले स्वारेजको विकल्पमा इटालियन क्लब इन्टर मिलानका अर्जेन्टिनी फरवार्ड लौटारो मार्टिनेजलाई पहिलो टार्गेटमा राखेको छ । १११ मिलियन युरो रिलिज क्लज भएका युवा खेलाडीलाई आगामी समरमा भित्र्याउन सके थुप्रै वर्ष टिममा ९ नम्बर खेलाडीको स्थान सुरक्षित हुने बार्सिलोनाको बुझाइ छ ।
मार्टिनेज मिलानमा पहिलो रोजाइका फरवार्ड भएकाले बार्सिलोना आएर बेन्चमा बस्नेछैनन् भन्ने बार्सिलोनालाई राम्रोसँग थाहा छ । र, सोही अवस्थाअनुसार मार्टिनेजलाई फुल इटाम खेलाडी बनाउन पनि बार्सिलोनाले चाँडै ३३ वर्ष लाग्न लागेका स्वारेको बिदाइको तयारी गरेको खबर छ । तर, रिपोर्टअनुसार कप्तान मेस्सीले अझै पनि स्वारेजको बिदाइ गर्नबाट क्लबलाई रोक्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
प्रकाशित मिति २४ पुष २०७६, बिहीबार १४:४९